Maitiro ekushandisa Microsoft Office 2016 zvachose - VidaBytes | LifeBytes
Maitiro ekumisikidza Microsoft Office 2016 zvachose
Networks muNetiweki | | hofisi
Pamwe iwe unofunga kuti kumisikidza iyo Microsoft Office 2016 Zvakaoma, asi isu tinokuudza kuti hazvina kumbobvira zvave nyore zvakadaro. Unogona kushandisa iyo activator hofisi 2016 nekukurumidza kuburikidza nenzira dzakasiyana siyana. Nekudaro, usati watsanangura maitiro ekuishandisa, zvakakosha kutanga utaura nezvazvo Microsoft Office 2016 uye zvarinopa.
1 Chii chinonzi Microsoft Office 2016?
2 Maitiro ekumisikidza hofisi yemahara?
2.1 Maitiro ekutanga: serial hofisi 2016 yakajairwa uye yehunyanzvi kuwedzera
2.2 Chinyorwa Chezvigadzirwa Makiyi eMicrosoft Office 2016:
2.3 MS Office 2016 Kiyi:
2.4 Yemahara MS Office Chigadzirwa Kiyi:
2.5 Chigadzirwa chigadzirwa cheMicrosoft Office 2016:
2.6 MS Office 2016 Serial Nhamba:
2.7 Yakazara Hofisi 2016 Chigadzirwa Kiyi:
2.8 Maitiro maviri: shandisa hofisi 2016 isina zvirongwa kuburikidza ne .bat faira
2.8.1 Tevedza matanho ari pazasi ekumisikidza Microsoft Office 2016:
2.9 Maitiro matatu: kuburikidza neKMS Pico
2.9.1 Matanho ekurodha muhofisi izere 2016 activator:
3 Maitiro mana: kumisikidzwa kweHofisi 2016 Professional pamwe uye zvakajairwa kuburikidza neMicrosoft Toolkit
3.1 Tevedza nhanho idzi kurodha pasi nekuisa Microsoft Toolkit yekumisikidza Microsoft Office 2016
4 Maitiro ekuchinjisa Office 2016
5 Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve kuita Microsoft hofisi 2016
5.0.1 Zvakachengeteka here kushandisa Microsoft Office uchishandisa nzira idzi?
Chii chinonzi Microsoft Office 2016?
Microsoft Office 2016 Iyo vhezheni yeMicrosoft Office yekugadzira suite, asi inobudirira zvese Hofisi 2013 uye Hofisi yeMac 2011, uye inotangira Hofisi 2019 kune ese mapuratifomu.
Iyi vhezheni ye Microsoft Office 2016 Inotaridzwa neakadzokororwa kutaridzika kutaridzika nehunhu mashandiro uye nekunatsiridza kutaridzika. Pakati pezvinhu zvaro zvinoshandiswa iwe uchawana: Shoko, Excel, PowerPoint uye Outlook.
Muchikamu chino iwe unowana ruzivo rwese rwakakodzera ku dhawunirodha Hofisi 2016 32 mabheti akasununguka muSpanish akazara ne serial uye zvakare kurodha Office 2016 64 mabheti akasununguka muSpanish akazara ne serial. Rangarira kungotora pasi pasuru inoenderana neprosesa yekomputa yako.
Maitiro ekumisikidza hofisi yemahara?
Kana iwe usina ruzivo rwekuti ungaisa sei uye shandisa Microsoft Office mahara, hapana chikonzero chekushushikana, mune ino dzidziso iwe unowana ese anodikanwa ruzivo nhanho nhanho.
Nhasi kune nzira dzakawanda, dzakawanda dzeku activate hofisi yemahara asi pamwe havazi vese vachashanda. Vamwe vakarega kushanda uye vamwe havaenderane pane chaiwo mashandiro. Nekudaro, pano isu tinokuunzira ina nzira dzinonyatsoshanda uye dziripo nhasi.
Maitiro ekutanga: serial hofisi 2016 yakajairwa uye yehunyanzvi kuwedzera
Yekutanga nzira ndeye kuburikidza kiyi yechigadzirwa uye ichi hachisi chinhu chinopfuura seti yeanenge makumi maviri nemashanu alphanumeric mavara. Mamwe makiyi echigadzirwa e Microsoft Office 2016 kazhinji vane mavara akawanda. Iyi kiyi inoenderana nenzira yawakaiwana nayo. Pazasi iwe unowana runyorwa rwechigadzirwa makiyi e shandisa Microsoft Office 2016:
Chinyorwa Chezvigadzirwa Makiyi eMicrosoft Office 2016:
MS Office 2016 Kiyi:
Yemahara MS Office Chigadzirwa Kiyi:
Chigadzirwa chigadzirwa cheMicrosoft Office 2016:
MS Office 2016 Serial Nhamba:
Yakazara Hofisi 2016 Chigadzirwa Kiyi:
Kuti uite kuti iite nemakiyi aya unofanira kutanga waiisa. Kana usati waiisa izvozvi, ino ndiyo nguva yakanaka yekuzviita. Chechipiri, kana uchinge waiswa, unofanirwa kutanga chero sevhisi yayo, ini ndinokurudzira izwi. Mushure meizvi, kana uchitanga sevhisi inokumbira iwe pakarepo chigadzirwa serial uye nenzira iyi unogona kuimisa. Nekudaro, kana ikasabvunza, tevera nhanho idzi:
Dzvanya pa archive uye sarudza nhoroondo.
Tsvaga musangano «Chigadzirwa kiyi»E tinya pairi.
Pinda kiyi yechigadzirwa ku shandisa Microsoft Office uye simbisa password.
Meseji ichaonekwa ichitaura «Microsoft Office 2016 yakaitwa». Nenzira iyi iwe unenge uine yako package Microsoft Office 2016 yakaitwa uye iwe uchave unokwanisa kuverenga kune ese mashandiro ayo.
Kana nzira iyi isina kukushandira, asi iwe uchiri kuda shandisa Microsoft Office 2016, ramba uchiverenga nzira dzinotevera.
Maitiro maviri: shandisa hofisi 2016 isina zvirongwa kuburikidza ne .bat faira
Iyi nzira iri nyore zvishoma asi inoshanda kune shandisa Microsoft Office isina zvirongwa uye isina makiyi echigadzirwa. Inosanganisira kuitisa yakambonyorwa .bat faira kuita iyo Microsoft Office 2016 activation.
Tevedza matanho ari pazasi ekumisikidza Microsoft Office 2016:
Kopa kodhi inobuda pawebhusaiti ino. (https://www.miblocdenotas.com/279692)
PaPC yako desktop, tinya kurudyi uye gadzira nyowani nyowani gwaro.
Namatira kodhi iwe yawakateedzera kare uye chengeta gwaro se «activator.cmd»Unofanira kuisa makotesheni muzita kuitira kuti igone kuchengetedzwa chaizvo.
Mhanya iyo faira activator.cmd uye rega ndiite iyo Microsoft Office 2016 activation.
Kana iwe wasvika pano uye uchitevera matanho ese, saka unofanira kunge watove nawo yakamisikidzwa Microsoft Office 2016. Nekudaro, kana izvi zvisiri izvo uye kumisikidza kushanda kwakundikana, ndinokurudzira kuti uenderere mberi nekuverenga nzira dzinotevera.
Maitiro matatu: kuburikidza neKMS Pico
Para shandisa Microsoft Office 2016 uye unakirwe nemabasa ayo, unogona kushandisa chishandiso KMS Peak. Ichi chishandiso chiri nyore kwazvo kushandisa uye chinoshanda kwazvo kumisikidza hofisi mune chero vhezheni. KMS Peak es activator hofisi 2016 Yakawanda yakakurudzirwa, inoonekwawo sechigamba chakasimba kwazvo chekutsemura hofisi 2016.
Unogona download KMSPico kubva kune yayo yepamutemo peji, kuitira kuti iwe uve nechokwadi chekuti urikutora nekuisa yepamutemo vhezheni ye KMSPico kubatanidza hofisi 2016.
Matanho ekurodha muhofisi izere 2016 activator:
Dhawunirodha KMS Activator hofisi 2016.
Mhanya iyo yakadzingwa .exe faira uye ita shuwa yekuchengeta ese masevhisi akavharwa Microsoft Office 2016.
Kana chirongwa chikatakura, tinya pane icon Microsoft Office 2016 uye nzira yekuchaja ichatanga. Izvo hazvina basa neshanduro ye Office 2016 iyo iwe yawakaisa, zvakadaro, ichaitwa yakavhurwa zvinobudirira. Iwe unogona kunge wakaisa Microsoft Office 2016 nyanzvi pamwe ne2016 o Microsoft Office 2016 yakajairwa.
Mushure meizvi, yako package office 2016 ichagadziriswa zvizere uye iyo Microsoft Office 2016 KMSPico activator ichave yaita basa rayo.
Tarisa kuti iyo Microsoft Office 2016 activation yakaitwa nemazvo. Vhura iyo Office 2016 sevhisi, tinya faira, uye sarudza account.
Muchikamu che Chigadzirwa ruzivo meseji inofanira kuoneka Yakagadzirwa chigadzirwa. Kana zvisiri, chimwe chinhu chakanganisika uye ini ndinokurudzira iwe kuti uedze iyi nzira zvakare.
Kana mushure mekumwe kuyedza iwe usati wakwanisa kumisa chigadzirwa chako kubva Microsoft Office 2016, Ndinokurudzira kuti ushandise nzira inotevera.
Maitiro mana: kumisikidzwa kweHofisi 2016 Professional pamwe uye zvakajairwa kuburikidza neMicrosoft Toolkit
Iyi nzira yakafanana chaizvo ne KMS Pico yehofisi 2016 asi zviri zvechinyakare uye zvine hushamwari interface. Microsoft Toolkit ndiro zita rechishandiso ichi richakubatsira iwe shandisa Microsoft Office 2016. Parizvino, ichi ndicho chete chishandiso chinoshanda chinogara chiri 100% kubudirira. Iyo yemahara, iri nyore kushandisa, uye haina hutachiona zvachose, saka haufanire kunetseka.
Microsoft Toolkit isati yazivikanwa se EZ Activator uye yakagadziriswa muna 2010 nenhengo huru ye Hwangu Hupenyu hweDhijitari. Ichi chishandiso chinoshanda nemazvo pa offline mode, saka hauchazoda iyo Internet yekumisikidza yako Hofisi 2016.
Kuti ushandise chishandiso ichi, unofanira kutanga kudzima antivirus yako kwenguva pfupi. Izvi zvinodaro nekuti activator chigamba chinoshandura kodhi yeHofisi yako 2016 package uye nekudaro inomisikidza. Usatombo kunetseka, mushure meizvi, unogona kumisikidza yako antivirus zvakare uye ramba uchichengetedza zvakavanzika zvako.
Tevedza nhanho idzi kurodha pasi nekuisa Microsoft Toolkit yekumisikidza Microsoft Office 2016
Download Microsoft Toolkit kubva kune yayo yepamutemo peji.
Unzip iyo faira Microsoft Toolkit.rar kuti iwe paIndaneti. Pasiwedhi yeiyo .rar faira iri "official-kmspico.com". Mushure meizvi, mhanyisa iyo faira Microsoft Toolkit.exe kutanga chirongwa.
Iwe uchaona bhokisi rematurusi neHofisi neWindows logo pachiratidziri. Sarudza iyo Hofisi logo kuti uenderere mberi.
Iwindo idzva repop-up richaonekwa neakawanda sarudzo dzakabatanidzwa. Dzvanya pane iyo tebhu Activation wobva wadzvanya EZ Activator. Maitiro aya anotora mashoma mashoma kuti apedze.
Mushure meizvozvo, unogona kuona hwindo reshoko richitaura izvozvo Hofisi 2016 inoitwa.
Nenzira iyi Hofisi yako 2016 package ichagadziriswa zvachose. Kuti utarise chinzvimbo chechigadzirwa chako, tanga Hofisi 2016 sevhisi, tinya Faira> account> kubva ipapo unogona kuona meseji Yakagadzirwa chigadzirwa.
Ndizvozvo, nenzira iyi unogona kumisikidza chero vhezheni ye Microsoft Office zvachose. Zvakare, chishandiso ichi chinoshandiswa kumisikidza vhezheni dzeWindows.
Maitiro ekuchinjisa Office 2016
Neiyi vhidhiyo yakapusa iwe unodzidza mune yakapusa nzira kumisikidza kweyakagadziridzwa Hofisi 2016.
Inowanzo bvunzwa mibvunzo nezve kuita Microsoft hofisi 2016
Zvakachengeteka here kushandisa Microsoft Office uchishandisa nzira idzi?
Hongu, hongu, kumisikidza Hofisi kubva kune imwe yeiyi nzira ndeye 100% yakachengeteka uye yakachengeteka. Nekudaro, iwe unofanirwa kutevedzera ese matanho anoratidzwa kuti uve nechokwadi chekubudirira maitiro.
Chii chandinoita kana rezinesi rapera mushure mechinguva?
Kana mushure mechinguva rezinesi rapera uye isingakutenderi kushandisa ese mashandiro, inguva yekushandisa activator zvakare. Ndinokurudzira kuti ushandise nzira ye Microsoft Toolkit kuvimbisa kushanda mukumisikidza yako Microsoft Office 2016.
Yakazara nzira kuchinyorwa: HupenyuBytes » hofisi » Maitiro ekumisikidza Microsoft Office 2016 zvachose
Client server dhizaini mune dhatabhesi Dhata!
Chii chinonzi middleware? Nhoroondo, kunyorera, uye zvimwe